नेपाली भूमिमा भारतीय सेना : १८ वर्षसम्म १८ पोस्ट - Nagarik Bahas
- पत्रपत्रिका : पर्शुराम काफ्ले-नयाँ पत्रिका दैनिक
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०७, २०७७ समय: ७:१६:०८
काठमाडौं – नेपालको सार्वभौम इतिहासमा अँध्यारो अध्याय : १५ फागुन २००८ मा काठमाडौं विमानस्थलमा उत्रिएको भारतीय सेना १७ पुस २०२६ सम्म नेपालमा थियो, नेपाली भूमिमा १७ पोस्टमा तैनाथ भएका भारतीय सैनिक १८ वर्षपछि मात्र फर्किए, तर ०१९ सालमा कालापानी आएको सेना अहिलेसम्म फर्किएको छैन
त्यहीबीचमा सन् १९६२ (वि.सं. २०१९) मा भारत र चीनबीच युद्ध भयो । चीनसँग युद्धका लागि भारतीय फौजले नेपाली भूमि कालापानीमा आफ्नो शिविर स्थापना ग¥यो । युद्ध सकिएपछि पनि कालापानीबाट भारतीय फौज फर्किएन । यसरी नेपालमा १७ पोस्ट पहिले थिए, कालापानी कब्जा गरेर भारतले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति १८ ठाउँमा पु¥यायो ।
भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत डा. भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘यो विषयमा तत्कालीन गृहसचिव क्षेत्रविक्रम राणासँग मेरो कुरा भएको थियो, उहाँले भारतले नसोधी फौज राखेको बताउनुभएको थियो । खुला करिडोर भएकाले चिनियाँ सेना भारततर्फ अघि बढ्न सक्ने भयका कारण कालापानीमा भारतीय सेना बसेको भन्ने नेपाल सरकारको बुझाइ थियो,’ डा. थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘लडाइँ सकिनेबित्तिकै संवाद सुरु हुनुपथ्र्यो । नभएपछि बिस्तारै भारतीयहरूले अखडा बलियो बनाउँदै लगे । भूभाग हाम्रो हो, तर हाम्रो हेलचेक्र्याइँका कारण भारतीय कब्जामा रहिरह्यो ।’
तर, नेपालबाट सेना फिर्ता गर्छौँ भनेर भारतलाई मनाउन खनालको प्रतिनिधिमण्डलले ६ दिन मिहिनेत गर्नुप¥यो । १३ देखि १९ भदौसम्म दिल्लीमा भएको वार्तापछि सैनिक फिर्ता गर्न भारत सहमत भयो । तर, प्रक्रिया पूरा गर्न फेरि ६ महिना लाग्यो ।
तर, ०२६ जेठ २३ देखि २७ सम्म नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री दिनेश सिंहले बाँकी भारतीय सैनिक फर्किने विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएनन् । त्यतिवेला अमेरिकीहरू पनि भारतीय मिसन फर्किन्छ भन्नेमा विश्वस्त थिएनन् । डा. जयराज आचार्यद्वारा लिखित ‘यदुनाथ खनाल ः जीवनी र विचार’ पुस्तकका अनुसार अमेरिकी राजदूत क्यारोल सिलेसले परराष्ट्रसचिव खनालसँग भनेकी थिइन्, ‘भारतले सजिलै फिर्ता लैजाने अवस्था छैन, तपाईंहरूले किन यस्तो माग गरेको ?’
सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेर भारतीय चुनौती सामना गर्ने मार्ग अख्तियार गरेको छ । ०२६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले १७ वटा भारतीय पोस्ट हटाउन चालेको कदमजस्तै लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटेर वर्तमान सरकारले अर्को ‘बोल्ड’ कदम चालेको छ । अब नेपाली भूमिबाट भारतीय फौज फिर्ता पठाउन र नेपाली भूमिमा नेपालकै झन्डा फहराउन सरकारले गम्भीर र अटुट कूटनीतिक पहल लिनु जरुरी छ । साभार : नयाँ पत्रिका दैनिकबाट